Bhubaneswar ထံမှသီရိလင်္ကာခရီးစဉ် | + 91-993.702.7574: မှာ Call
ယခင်က Ceylon အဖြစ်လူသိများသီရိလင်္ကာ, အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း, အိန္ဒိယ၏သေးငယ်တဲ့ကျွန်းတောင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လှပသောနိုင်ငံအကြောင်းတစ်ခုတည်းသောသေးငယ်တဲ့အရာပါပဲ။ Bhubaneswar အထုပ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့သီရိလင်္ကာခရီးစဉ်နှင့်အတူသငျသညျသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများသက်သေခံပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောမြင်ကွင်းများကောင်းသောနိုင်ငံများနှင့်သဲ shorelines ဖို့မိုးသစ်တောနှင့်အရိုး-ခြောက်သွေ့တဲ့လယ်ကွင်းထဲကနေကိုတိုးချဲ့ပါ။ တိုင်းပြည်ကသူတို့ယိမ်းနွဲ့အုန်းသီးလက်ဝါးတောင်နှင့်ရာဘာနှင့်လက်ဖက်စိုက်ခင်းနှင့်အတူရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု, ရွှေသဲကမ်းခြေပါတယ်။ Bhubaneswar ကနေသဲကျောက်စရစ် '' သီရိလင်္ကာခရီးစဉ်နှင့်အတူသငျသညျသီရိလင်္ကာရှာဖွေစူးစမ်းအားလုံးစိတ်ကို-မှုတ်အတွေ့အကြုံများကိုရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်းသွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်, သင်ပေါ်တူဂီ, ဒတ်ခ်နှင့်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သည့်အခါလက်ထက် မှစ. ကိုလိုနီဗိသုကာတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရာဌာနမှာဒေသခံပွဲတော်များနှင့်ကျားသစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အချို့သောအဆင်အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမိုင်း, အစဉ်အလာများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အရပ်ဌာန၏သမိုင်းသက်သေခံရန်ကိုချစ်သူခရီးသွားဧည့်သည်, သီရိလင်္ကာသူတို့အဘို့ယဉ်ကျေးမှုတြိဂံပေးထားပါတယ်။ Bhubaneswar ထံမှသီရိလင်္ကာခရီးစဉ်သဘောသဘာဝကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအားလုံးကောင်းသောအရာနှင့်မှင်တက်မိသင်သည်စွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာတွင်လည်းထူးခြားဆန်းပြားကမ်းခြေလူသိများနှင့်ရွှေနေရောင်အားလုံးယခုနှစ်န်းကျင်ထွန်းလင်းနေသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Yala အမျိုးသားဥယျာဉ်, Wilpattu အမျိုးသားဥယျာဉ်, Minneriya အမျိုးသားဥယျာဉ်, Udawalawe အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့် Horton ကလေယာဉ်အဖြစ်အချို့သောကြီးမြတ်အမျိုးသားပန်းခြံ၏ပါရှိပါသည်။ Bhubaneswar ထံမှသီရိလင်္ကာခရီးစဉ်ကိုသင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းနည်းနည်းကောငျးကငျဘုံစူးစမ်းပါစေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ tourist- သဘာဝတရားချစ်မြတ်နိုးတဲ့, ကလေးတွေ, စွန့်စားသို့မဟုတ်အခြားမျိုးအမြိုးမြိုးသောအားပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကိုရပ်တန့်ရန်မနိမိတ်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ ယခုသင့်သီရိလင်္ကာအားလပ်ရက်အထုပ်များဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။
KATUNAYAKE - Kandy - NUWARA ELIYA - BENTOTA - ကိုလံဘို
tour Code ကို: 1001
နေ့ 01: KATUNAYAKE - Kandy - 115 ကီလိုမီတာ 2.5 နာရီ
Bandaranaike အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာရောက်ရှိ, Katunayake Pinnawala ကနေတဆင့် "Spiceland ကိုလံဘို" ကကိုယ်စားလှယ်နှင့် Kandy အတွက်ဟိုတယ်ကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါမွေး - ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်နှင့်အရွယ်အစားနို့တိုက်ကျွေးရေး၏ဆင်၏အိမ်, ရေချိုး, အတူတူကစားများနှင့်ပင်အဖော်ရှာ။ ဤရွေ့ကားဒဏ်ရာရတွေ့ရှိခဲ့သို့မဟုတ်တော၌စွန့်ပစ်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောတှငျမှေးဖှားပင်နည်းနည်းကလေးနွားကလေးရှိပါတယ်။
09.15am Bottle သ-နို့တိုက်ကျွေးမှုကလေးဆင်
'' Ma Oya '' မှာ 10.00am နံနက်ရေချိုး
01.15pm Bottle သ-နို့တိုက်ကျွေးမှုကလေးဆင်
'' Ma Oya '' မှာ 02.00pm နေ့လည်ရေချိုး
05.00pm Bottle သ-နို့တိုက်ကျွေးမှုကလေးဆင်
Hingula အတွက်အမွှေးအကြိုင်ဥယျာဉ် (Kandyan အမွှေးအကြိုင် 99):
ကိုလံဘိုနှင့် Kandy တောင်တော်မြို့တော်များအကြားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ နံ့သာမျိုးသီရိလင်္ကာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကြည့်ဖို့ Mawanella အတွက်အမွှေးအကြိုင်ဥယျာဉ်ကို Hingula သွားရောက်ကြည့်ရှုကျော်ကြားသည်။ သစ်ကြံပိုး, Cardamom, ငရုတ်ကောင်း, လေးညှင်းပွင့နှင့် nutmeg အရပ်ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနံ့သာမျိုးကိုမှထို့အပြင်အိမ်ခြံမြေသီရိလင်္ကာဟင်းမှုန့်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရောင်းချခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓ၏မွငျ့မွတျသှားရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ဘုရားကျောင်းသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဗိမာနျတျော Is နှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာအိမ်ရာသွားရှေးဟောင်းပစ္စည်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ရှငျဘုရငျသ Wimaladharmasooriya အားဖြင့် 16th ရာစုအေဒီ built-in ခဲ့သည်။
နေ့လည်စာနှင့်ညစာကိုညတွင်းချင်း Kandy အတွက် Hotel ၌နေထိုင်။
နေ့ 02: Kandy - NUWARA ELIYA - 77 ကီလိုမီတာ - 3.5 နာရီ
Kandy အတွက်ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာ & Peradeniya နှင့် Ramboda မှတဆင့် Nuwara Eliya အဘို့ချန်ခြွင်း။
ဒါက 16th ရာစုတစ် Kandyan ရှငျဘုရငျ၏အပျြောအပါးဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်ဗြိတိန်စစ်အစိုးရကာလအတွင်းတစ်ဦးရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်သို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
operating နာရီ: 7.30am - 5.00pm (နေ့စဉ်)
စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကော်ဖီဆိုင်: 10.00am - 5.00pm
ကျောက်မျက်ပြတိုက် (Lakmini အားဖြင့် "Tiesh"):
တရားဝင် Lakmini Pvt Ltd မှအဖြစ်လူသိများ Tiesh အဖိုးတန်ကျောက်များများအတွက်ဒဏ္ဍာရီဆိပ်ဖူးနှင့်အကောငျးဆုံးယခုနှစ်ကျော်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရတနာ handcrafted သိရသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး, ကြောင်မျက်လုံး, တည်ထောင်ခြင်း၏ Etc.A ထူးခြားတဲ့ feature ကိုအဖိုးတန် source ဖို့အသုံးပြုတဲ့ simulated ကျောက်မျက်ရတနာသတ္တုတွင်းအပြာရောင်နီလာ, စတားနီလာ, ပတ္တမြား, စတား Ruby, White, နီလာ, အဝါရောင်နီလာဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသီရိလင်္ကာအဖိုးတန်ကျောက်များ၏ခင်းကျင်းတွေထဲမှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိကျောက်မျက်ရတနာ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Kandy ၏ရုပ်ပုံ-စုံလင်သောမွို့၌သီရိလင်္ကာရဲ့အလွန်နှလုံး၌တည်ရှိသော "Tiesh" ဖောက်သည်များ၏အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများမှကု သ. မရသော။ Lakmini အားဖြင့် Tiesh 1997 စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကရတနာအတွက် modern- ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်းများ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ခဲ့သည်။
Mackwoods Labookellie လက်ဖက်ရည်စင်တာ
တည်ရှိပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1500 Labookellie အိမ်ယာ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းအကောင်းဆုံးလက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေထဲကတစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားများအတွက်ရေပန်းစားမှတ်တိုင်ဟာ salubrious တောင်ပေါ် clime အတွက်၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာ Mackwoods လက်ဖက်ရည်တွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေး itinerary ယနေ့ အဖြစ် Ceylon လက်ဖက်ရည်များထုတ်လုပ်ထားတဲ့မှတ်သားစရာများတစေ့တစောင်းပေး။ ရှည်လျားဥယျာဉ်ကိုလတ်ဆတ်သောအရည်အသွေးမြင့် Labookellie လက်ဖက်ရည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အ Kandy ထံမှ Nuwara-Eliya မှဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်နှစ်ဦးစလုံးအကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များမြေယာအမှတ်အသားဖြစ်ဘို့ရှိပါတယ်ရသော Labookellie လက်ဖက်ရည်ရေးစင်တာ။ ဒါကလက်ဖက်ရည် Center ကယင်း၏အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူ & ဖောက်သည်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေ setting ကိုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတိုးချဲ့နှင့် refurbished ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mackwoods Labookellie လက်ဖက်ရည်စက်ရုံ, လက်ဖက်စိုက်ပျိုးမှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအခမဲ့ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်နှင့်အတူဧည့်သည်များပေးပါသည်။
တောင်တပြင်တောင်စောင်း, ထူသောသစ်တောများနှင့်လက်ဖက်ရည် Estates ၏ချိုင့်ချအလျင်အမြန်နှိပ်, အလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်အတွက်သေးငယ်တဲ့ convergence မြစ် Nuwara Eliya ရှိ "Ramboda ရေတံခွန်" ဖြစ်ပါတယ်တဦးတည်းသော, သီရိလင်္ကာရဲ့အများဆုံးခမ်းနားရေတံခွန်များအချို့မှမွေးဖွားပေးပါ။ 3200ft ၏အမြင့်မှာဆင်း Cascading ။ အဆိုပါ Ramboda ရေတံခွန်သီရိလင်္ကာဟာရင်ခုန်စရာလွတ်မြောက်လာသော & သဘာဝကိုနှစ်သက်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလူကြိုက်များခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာကိုအောင်ဤလှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်းမှမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေတတ်၏။
နေ့လည်စာနှင့်ညစာကိုညတွင်းချင်း Nuwara Eliya အတွက် Hotel ၌နေထိုင်။
နေ့ 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 ကီလိုမီတာ - 5.5 နာရီ
Nuwara Eliya အတွက်ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာနှင့် Bentota များအတွက်ချန်ထားသော
နေ့လည်စာနှင့်ညစာကိုညတွင်းချင်း Bentota အတွက် Hotel ၌နေထိုင်။
နေ့ 04: BENTOTA - ကိုလံဘို - 65 ကီလိုမီတာ -2နာရီ
ဟိုတယ်, Bentota မှာနံနက်စာနှင့်ကိုလံဘိုအဘို့ချန်ထားသော
စီမံကိန်းများသုဉ်းသို့ရောက်ရှိကြသည်လိပ်များ၏လူဦးရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့စတင်ခဲ့ကြပြီးယင်းသို့စီမံကိန်းများကိုလိပ်သူတို့ရဲ့ဥ, ဥဖို့ကမ်းခြေလာဘယ်မှာသီရိလင်္ကာတောင်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါလိပ်ပုသဲသောင်ပြင်ပေါ်အပေါက်တစ်ပေါက်တူး, သူမ၏ကြက်ဥရေးသားထားပါတယ်နှင့်ကနေရောင်၏အပူများကနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးထင်သည်အဘယ်မှာရှိသဲနှင့်အတူကဖုံးလွှမ်း။ အဘယ်အရာကိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်ကြက်ဥငါးဖမ်းသမားများကထုတ်တူးနှင့်သူတို့ကိုလောင်သူတွေကိုရောင်းချနေကြသည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမူကားကြက်ဥထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းများကိုတက်ဝယ်နေကြတယ်နှင့်ငှက်ကသူတို့ကိုထကောက်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးနှင့်ကလေးငယ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ညဥ့်အချိန်တွင်နှစ်ရက်အကြာတွင်ပင်လယ်ထဲသို့ပါစေတဲ့ပူးတွဲဒေသများရှိသဘာဝလမ်းအတွက်အကောင်ပေါက်နေကြတယ် သူတို့ကိုရှင်သန်မှု၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်း။
ကိုလံဘို City Tour:
အဆိုပါ 16th ရာစုအတွင်းပေါ်တူဂီတို့ကတည်ဆောက်ခံတပ်အဖြစ်လူသိများသည့်စီးပွားရေးနှင့်မြို့လယ်ဧရိယာအားဖြင့်မောင်း။ Pettah များ၏အလုပ်များစျေးကွက်များနှင့်စျေးသို့သွားရောက်တစ်ဦးဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဟိန္ဒူဗိမာနျသို့သွားရောက်တစ်ဦးအဟောင်းဒတျချြဘုရားကျောင်းနှင့်သစ်ကြံပိုးဥယျာဉ်လူနေအိမ်ဧရိယာမှဆက်လက်။ အဆိုပါ Town Hall, လွတ်လပ်ရေးနေ့ရင်ပြင်နှင့် BMICH (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ) အတိတ်မောင်း။
ပရဒိသု RoadBare ခြေလျင်
ညား cityLiberty ပလာဇာ
Beverly StreetLaksalaetc ။
နေ့ 05: ကိုလံဘို - KATUNAYAKE - 37 ကီလိုမီတာ - 1 နာရီ
သင်တို့ပြေးရသောအချိန်အရထွက်ခွာဘို့ Bandaranaike အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, Katunayake အဘို့ချန်ခြွင်း။ ခရီးစဉ်၏အဆုံး။